स्वास्थ्य Archives - Purwanchal Today
सुरुङ्गा , पहिलो चरणमा चिया वगानमा काम गर्ने मजदुरको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरेको हल्दिवारी गाउँपालिकाले पुनः दोस्रो चरणमा विपन्न समुदायको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा २ सय ९६ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरेको गाउँपालिकाले दोस्रो चरणमा वडा नम्वर २ का वडा वासीको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा शुरु गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्वर गिरीले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष गिरीका ...
झापा,निरोगी छु, मलाई क्षयरोग नहुन सक्छ ।’ तपार्इं अनुमानमा हुनुहुन्छ ? ढुक्क नहुनुहोस् । हाम्रो शरीरमा क्षयरोगको किटाणुको जोखिम रहेको हुन्छ । यसरोगका किटाणु निष्कृय र सक्रिय दुई प्रकारका हुन्छन् । शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले निष्क्रिय क्षयरोगको कीटाणुलाई सक्रिय हुन दिइरहेको हुँदैन । तर सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुले क्षयरोग लाग्ने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा निष्क्रि...
पशुपतिगनर, प्रदेश नं १ का अस्पतालमा आउने बिरामीले आयुर्वेदिक, एलोपेथिक र होमियोपेथिक उपचार सेवा एकै ठाउँबाट पाउने भएका छन् । एउटै स्वास्थ्य संस्थामा तीनवटै पद्धतिको उपचार प्रदान गर्न प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४० बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी थप गरी सेवा विस्तार शुरु गरेको हो । एकै स्वास्थ्य संस्थाबाट तीन पद्धतिको उपचार प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा शुरु ग...
बिर्तामोड, मानिस जन्मिएपछि मृत्यु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, कसैको मृत्युले समाजमा यति धेरै मानिसको मन रुवाउने गर्दछ । यस्तै भएको छ – नबोल्ने ‘बा’ नामले परिचित झापाको बुद्धशान्ति–५ शान्तिनगरमा लोकनाथ खतिवडाको निधनले । जन्मजात बोली नआएका लोकनाथ शान्तिनगरमा नबोल्ने ‘बा’ ले चिनिने हुनुहुन्थ्यो । झापामा पहिलो पटक तीनले खेती गर्ने पूर्वमन्त्री नरेन्द्र बाँस्तोलालाई धेरैले चिन्ने गरेका थिए । उहाँले ...
झापा, गर्मी मौसममा अनुहारमा पिम्पल आउनु सामान्य मानिन्छ। तर जसको त्वचा ओइली हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले हरेक मौसममा पिम्पल आउने समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। कस्मेटिक उपायबाट केही समयका लागि यसलाई ठीक गर्न त सकिन्छ, तर केही समय पछि पुनः पिम्पल देखिन थाल्छ। यसको अतिरिक्त कस्मेटिक साह्रै महंगा पनि हुन्छन्, र यीनमा मिसाइको रसायनले छालामा नराम्रो असर पनि पार्छ। कहिलेकाँही तपाई सोच्नुहुन्छ होला कि, पिम्पलक...
झापा, नेपालको गाउँमा घिउ सर्वसुलभ पाइने चिल्लो पदार्थ हो । शहरी क्षेत्रमा गाउँमा कृषि पेशामा लागेका किसानहरुसँग घिउको भण्डार हुन्छ । तर , हामीसँग भएको स्रोत साधनको सही प्रयोग गर्न नजानेर हाम्रो जीवनमा समस्या हुने गर्दछ । अर्गानिक घिउ निकै स्वस्थकर मानिन्छ । तर, यसको मात्रामा भने ध्यान पुर्याउछ । घिउ खाएमा अनेक फाइदा मिल्छन् । घिउले छालालाई स्वास्थ राख्नुको साथै स्मरणशक्ति बढाउन पनि सकरात...
खुदुनाबारी,ठूला र जटिल रोग लागेर औषधि उपचार सहयोगका लागि सिफारिस लिन विपन्न नागरिकहरु जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय जान वाध्य भैइरहेको बेला झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस अघि झापा जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालयले दिँदै आएको थियो । आठ वटा रोगहरु लागेका विरामी औषधि उपचार सहयोग सिफारिस अब नगरपालिकाले नै दिने भएपछि विपन्न नागरिकहरुलाई राहत मिलेको छ । नेपाल सरकार...
चरपानेमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
बिर्तामोड, चारपाने साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा एक दिने निःशुल्क कान तथा आँखा शिविर सम्पन्न गरेको छ । दृष्टि आँखा अस्पताल बिर्तामोडको प्राविधिक सहयोगमा पञ्चरत्न माविको प्राङ्गढमा शिविर सम्पन्न भएको थियो । शिविरमा २ सय जनाले आँखा परीक्षण गराएका थिए भने १ सय ५० जनाले कान परीक्षण गराएको सहकारीकी प्रवन्धक मुना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । बिर्तामोड नगरपालिका उपप्रमुख पवित्रा महतर...
३२० बिरामीलाई निःशुल्क सेवा
झापा,झापाको मेचीनगर ११ स्थित धाईजन स्वास्थ्य चौकीमा स्व. बच्छला देवी सोसियल फाउन्डेशनको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सफलता पुर्वकसम्पन्न भएको छ । उक्त शिविरमा प्रत्यक्ष्य रुपमा ३२० जना बिरामीले निशुल्क सेवा लिनुका साथै आँखामा गम्भीर समस्या देखिएका १७ जनाबिमारीले मेची नेत्रालय काकरभिट्टामा निशुल्क शल्यकृयाको अबसर प्राप्त गरेका छन् । सो अबसरमा निशुल्क औषधि एवं चस्मा समेत वितरणगरिएको थियो । शल्यकृया ...
मोवाइल, ल्यापटपले बालबालिकाको आँखा छिट्टै बिग्रन्छ
अहिले धेरैजसो बालबालिका चस्मा पहिरिएका देखिन्छन् । आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस् त, हिजोको पुस्ताले यतिविध्न चस्मा लगाएका थिए र रु पक्कै थिएनन् । भन्नुहोला, त्यसबेला चस्मै कहाँ पाइन्थ्यो र ? कुरा त्यसो होइन । हिजो दिनमा भन्दा आजको दिनमा हामीले आँखाको दृष्टि गुमाइरहेका छौं । हाम्रो आँखा प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ । र, यसको सबैभन्दा बढी असर त साना बालबालिकामा परेको छ, जो बिहान उठ्नसाथ मोवाइल, ल...